Gadaan Kasabaa… – Welcome to bilisummaa
Nuti nurraa dhugaa
Mee nutin qoosina,
Mee nun akkeesinaa.
Nu isinirraa addaa
If nun fakkeesina.
Madaa hamtuu qabna
Mee nun fottooysina.
Ammaas nun dhiiysinaa,
Ciisa nun dhoorkinaa.
Gocha kalee dabree
Garaa keenya waadaa.
Osoo qabnu aadaa.
Guban sirna gadaa.
Seenaa gaarii qabnu
Achi buute tahee
Bu’uri maa badaa?
Maa xooleysan odaa,
Miila Bakar taatee
Eessaa abbaa kootin fida?
Yaa dhaloota arraa
Mee maal lafaa qabdaa,
Boru warra si booda.
Dhiiroo garba guddaa.
Aadaa teenya boontu
Duudhaa keenya faayaa
Yaa dhiiroo jabeessa,
Gowwaan garii fooyyee
Aadaan jabdu tahuu
Mee itti garsisaa.
Ittin boonaa dhiiroo
Kan beeynees barsiisa.
Aadaa nu mul’isaa.
Isii nu boonsisaa.
Keenya isii ibsa.
Sabni hoodan qabne
Kan beeyne seenaasa.
Sabummaa hin guutu
Saba ifiin jachuuf
Kanaaf aadaa teenya
Beekuu nu feesisa.
Sa’aa abbaan hore
Gaafa dhawe cabse
Ormi ija beeysaa.
Haalli ammaa kuni
Hedduu nama dhibaa.
Akka waan qaroomaa
Wallee itti fakkattee
Namni waanfi jibbaa.
Kafana isaa darbaa.
Fide tan arabaa.
Gowwaan tasaa muree
Tan alagaa erbaa.
Kophee miila miilaa
Kaayyachuuf fi dhiiba.
Dhugaa osoon arkuu
Hin fudhadhu soba.
Hanga yoomin dhiroo
Teenyaatu nu boonsa
Hin feenu tan ambaa. x2.
Previous Ajjeechaa Ilmaan Oromoo irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa ture Ifa Bahe
Next Flare-Up in Ethiopia’s Oromia Region